Toriteny 23 marsa 2014 : Mamonjy amin'ny fahotana ny Tompo | FJKM Amboniloha
Toriteny 23 marsa 2014
« Mamonjy amin’ny fahotana ny Tompo »
II Samoela 12:7-15 / Lioka 15: 11-24 / I Timonty 1:12-16
“Misaotra an’i Kristy Jesosy Tompontsika aho, Izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin’ny fanompoana, dia izaho, izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory; kanefa nahazo famindrampo aho, satria tamin’ny tsi-fahalalana no nanaovako izany noho ny tsi-finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan’ny Tompontsika tamin’ny finoana sy ny fitiavana, izay ao amin’i Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tetỳ ambonin’ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin’ireny izaho no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia ny mba hasehon’i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany, ny fahari-po rehetra ho fianarana ho an’izay hino Azy hahazoana fiainana mandrakizay”
I Timonty 1:12-16
1- Na tsy mendrika aza isika dia nataony mahatoky
Paoly, olona niova fo, ilay Saoly taloha mpanenjika fivavahana, mpiteny ratsy, mpampahory, manamavo ny anaran’I Jesoa Kristy, izay efa tsy nanantena fiainam-pamonjena nefa nofafan’Andriamanitra teo imasony izany tsy fahatanterahany rehetra izany. Isika koa dia mba efa toy izany, manana toetra toa an’i Paoly nefa dia novonjen’Andriamanitra matoa mbola toy izao. Mitaona antsika mba handini–tena hahafantatra ny lalan-dratsy rehetra teo aloha, manapa-kevitra hizotra amin’ny lalana marina ka sahy hiteny toa an’i Paoly fa ny fahasoavan’I Kristy no naha toy izao azy.
2- Tazony tsara amin’ny finoana ny famindrampon’Andriamanitra nomeny anao
Be lavitra ny fahasoavana omen’Andriamanitra antsika raha oharina amin’ny fahotana vitantsika. Ny Hazo Fijaliana no marika hita maso manamarina izany ; satria na inona na inona karazam-pahotana vitan’ny olona izay efa manana an’I Jesoa Kristy, ka entina eo amin’io Hazo Fijaliana io dia ho voafafa izany. Vokany, afaka manana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy.
3- Noho ny amin’ny famindrampon’Andriamanitra dia mijoroa ho fianarana ho an’ny mino
Ny dingana rehetra nolalovan’i Paoly dia voasoratra mba ahazoan’ny mino lesona sy fampianarana. Toetra 3 mampiavaka ny olonmbelona amin’ny biby
Ka na toy inona na toy inona faharatsiana cf Lioka , II Samoela 12 , dia tsapa fa niverina foana tamin’Andriamanitra ny fiafaran’ny fiainan’ny olona.
Fotoanan’ny karemy izao, fandinihin-tena, fibebahana ary fanoloran-tena. Raha mino sy mandray tsara ireo fampianarana ireo isika dia manana anarana ho velona any an-danitra ary ho tontosa avokoa ny andraikitra napetrak’Andrimanitra tamintsika.
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 23 mars 2014